Kianjan'i Mahamasina: Hamboarina hahazaka olona maherin'ny 50 000
dimanche, 14 juillet 2019 17:08
Nandritra ny fandraisana makotrokotroka ny Barea, taorian'ny dingana nampitolagaga vitany nandritra ny fiadiana ny Amboaran'i Afrika, amin'ny baolina kitra, andiany faha-32, no nanambaran'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina fa hamboarina hahazaka olona 50 000 ka hatramin'ny 60 000 ny Kianja Monisipaly Mahamasina, ary ho kianja lehibe indrindra aty amin'ny Ranomasimbe indianina.
Hanafatra bozaka (gazon) avy any Angletera isika, hoy ny filoha, hasolo ny efa misy amin'izao ao. Tsy mbola nambara kosa ny fe-potoana heverina hamitana ny asa.
Nifandroritan'ny federasiona Malagasy ny baolina kitra sy ny federasiona Malagasy ny rugby io kianja io, raha nisy ny tetikasan'itsy voalohany hanova azy ho sentetika, rehefa nahazo famatsiam-bola avy amin'ny federasiona iraisam-pirenena amin'ny baolina kitra (FIFA).
Sanganehana teo ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, izay tompony sy mitantana ary mikojakoja ny fotodrafitrasa tamin'izay. Ny Kianja Rabemananjara ao Mahajanga no nisitraka ny fanatsarana, ka nanaovana azy ho sentetika sy nanorenana fotodrafitrasa fanampiny.